Mgbanwe nke ọrụ nke netwọkụ mmekọrịta na ecommerce | ECommerce ozi ọma
José Ignacio | | Marketing, elekọta mmadụ media
Dika mgbasa ozi na e-commerce na-abanyewanye na ndụ anyị, ohere maka ha ịmekọrịta ma na-ewusi ibe ha ike enweghị ike ịgụta ọnụ, na-atụle na onye ọ bụla na-etinye ihe dị ka otu elekere na nkeji 40 na-agagharị na mgbasa ozi mmekọrịta mmadụ niile. Ụbọchị, na ọnụọgụ nke ndị na-ere ahịa n'ịntanetị na US ga-eti 217 nde afọ a.
N'oge ochie, a gosipụtara ọnụnọ azụmahịa site na mgbasa ozi akwụkwọ akụkọ na ebe a na-echekwa anụ ahụ. Ugbu a, na dijitalụ afọ, azụmahịa aha na-adị ndụ ma na-anwụ n'ihi na ọnọdụ ha na-elekọta mmadụ media. Ugbu a, a na-eji ndị na-elekọta mmadụ mgbasa ozi eme ihe dị ka ụzọ isi kpọsaa, bulie ọnụnọ ha n'ịntanetị, ma nye ndị ahịa ọrụ dị elu.
N'ime afọ a, enweghi obi abụọ na n'ikpeazụ anyị nwere ike ịtụ anya na usoro ndị ahụ ga-aga n'ihu, ebe ndị ọhụrụ na-apụta. Ka anyị leba anya na ọrụ na-eto eto nke mgbasa ozi mmekọrịta na e-azụmahịa.
1 Akwụ ụgwọ Mgbasa ozi na Social Media
2 Ozi nkeonwe
3 Ọrụ na-eto eto nke azụmahịa e-commerce
3.1 Kwusaanụ na nchekwa data kwa ụbọchị
3.2 Dị nkenke ma dị nkenke
3.3 Setịpụ ihe mgbaru ọsọ gị
3.4 Jiri uru nke netwọkụ mmekọrịta dị iche iche
3.5 Jiri Nyocha
3.6 Ihe mebere onye ọrụ
3.7 Mara ndị ahịa gị
3.8 Adịla naanị ire
4 In-App ịzụrụ
4.1 Advertisinggwọ mgbasa ozi
4.2 Vidiyo dị ndụ
4.3 Eziokwu doro anya
Akwụ ụgwọ Mgbasa ozi na Social Media
Site na nhazi nke ịhazi ihe na-enweghị isi nke enwere ike itinye na mgbasa ozi Facebook (afọ, ọdịdị ala, mmasị na ndị ọzọ) yana nkọwa nke Facebook nwere ike iji kọọ nsonaazụ ya, ọ bụghị ọrụ dị mfe maka ụdị iji gaa n'ihu na Facebook na mmekọrịta ndị ọzọ. mgbasa ozi mgbasa ozi. Ọ bụkwa mmeri Facebook, nke bulitere ihe karịrị $ 7 ijeri na mgbasa ozi na 2016.
Brandsdị ndị nwere ihe ịga nke ọma na 2017 ga-abụ ndị nwere ike ị nweta oke iru na arụmọrụ ha na mgbasa ozi akwụ ụgwọ na mgbasa ozi mmekọrịta. William Harris, onye na-ahụ maka ịba ụba e-commerce maka elumynt.com, kwuru, sị: “A hụrụ m na ụdị azụmahịa e-commerce na-etinye ego karịa karịa na mgbasa ozi mmekọrịta ọha na eze kwụrụ ụgwọ, echekwara m na ụdị a ga-aga n’ihu na 2017… ezughi oke ịkwụ ụgwọ naanị Mgbasa ozi na Shozụ ahịa Google. Ga-ahụ ezigbo ndị na-ege ntị na Facebook Ads, Instagram Ads na ndị ọzọ na ndị ọzọ, na Pinterest na ndị ọzọ na-akwụ ụgwọ na-elekọta mmadụ media akaụntụ. Ọ na-adịwanye mfe ịtọlite ​​ihe ndị a ma soro usoro mgbasa ozi na-alọghachi, nke pụtara na ụdị ndị ọzọ ga-amalite ime nke a. "
N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, ndị nyocha achọpụtawo ihe na-adọrọ mmasị na nke a na-atụghị anya ya. Ọ bụ ezie na ojiji nke netwọk mmekọrịta ọha na eze dị ka Facebook na Twitter na-amalite ịda mba, ọrụ izipu ozi nzuzo na-agbawa ewu. WhatsApp, Snapchat, na Facebook Messenger bụ nnukwu anụ mmiri nwere ọnụ ọgụgụ gbara ọkpụrụkpụ na-abanye n'ime ijeri mmadụ.
Njikọ: offọdụ n'ime Top 10 Chatbot Platform Tools iji mepụta Chatbots maka azụmahịa gị
Ebe ndị mmadụ na-aga, azụmaahịa ga-agbaso, ụdị ndị a na-abanye n'ime izi ozi nkeonwe site na nkata. Ndị na-akparịta ụka, ndị mmadụ AI nwere ike ịme ka ezigbo mkparịta ụka, nwee ike ịza ajụjụ gbasara ngwaahịa, nye ndụmọdụ ma dozie mkpesa ndị ahịa.
Ndị ahịa na-eji nwayọ nwayọ na echiche ahụ. Dabere na Venturebeat.com, 49,4 pasent nke ndị ahịa na-ahọrọ ịkpọtụrụ azụmahịa site na ọrụ izipu ozi 24/7 karịa ekwentị. Sdị ga-ahụ ụzọ mgbe ha malitere ile anya na ọrụ catamaran dị ka ọwa mgbakwunye iji ruo ndị ahịa.
Ọzọkwa, ọtụtụ ọrụ izi ozi nkeonwe na-enye ugbu a ijikọ ego. Meghe WeChat, isoro onye nnọchianya nke akara ọgụgụ isi na-akparịta ụka, na ịzụta ngwaahịa na-enweghị imechi ngwa ahụ ọbụlagodi otu ugboro bụ kpamkpam n'ime mpaghara nke ohere na 2017.
Ka o siri sie ike ịzụta ma ọ bụ nweta ihe, o yikarịrị ka anyị ga-agafe. Nke a na-akọwa ihe kpatara saịtị ecommerce na-eji ogologo oge iji buru ibu nwere ọnụego bounce dị elu, yana ụlọ ahịa dị n'ịntanetị nwere ihu na ihu na-ere obere. Otu nwere ike ịzụta ngwaahịa site na Instagram, Pinterest na Twitter. Ozugbo Apple Pay na-enweta ahụmịhe zuru ebe niile, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe na-atụ ụjọ iche echiche nfe ịzụ ahịa ga-adị mfe - ọ bụrụ na ị hụ ihe masịrị gị na mgbasa ozi mmekọrịta, otu kụrụ ga-enyefe ya n'ọnụ ụzọ gị. Dị kwesịrị ịmalite ozugbo nyochaa otu ha nwere ike isi ree ngwaahịa ha site na mgbasa ozi mmekọrịta, na-ejikọ ọnụnọ mgbasa ozi siri ike na usoro ịzụta dị mfe.
Ọrụ na-eto eto nke azụmahịa e-commerce
Mgbasa mgbasa ozi abịawo ogologo oge site na ijikọ ndị mmadụ ka ha rụọ ọrụ dị mkpa na azụmaahịa niile. Ndị mmadụ na-aga n’ onlinentanet, ha na ndị ọzọ adịkwa n’ezigbo mma. Brandsdị achọpụtawo mgbanwe ahụ, n'ezie. Tupu mgbe ahụ, ụlọ ahịa anụ ahụ na mgbasa ozi gosipụtara n'akwụkwọ azụmahịa. Mana na afọ dijitalụ, aha azụmahịa na-adị ndụ ma nwụọ maka ọnọdụ ha na mgbasa ozi mmekọrịta.
Mgbasa mgbasa ozi nwere ikike iduzi ndị na-azụ ahịa na ngwaahịa ọhụrụ ma ọ bụ ezigbo ahịa. Mana ọbụghị naanị nke ahụ, netwọkụ mmekọrịta na -emepụta echiche nke obodo ma na-etinye ndị mmadụ aka n'ụzọ ịzụ ahịa. Nke bụ eziokwu bụ na ọtụtụ ndị mmadụ na-echigharịkwuru na-elekọta mmadụ media inyere ha aka ime ka a zuo mkpebi nakwa na gburugburu 75% nke ndị mmadụ zụtara ihe n'ihi na ha hụrụ ya na a na-elekọta mmadụ media n'elu ikpo okwu. Na mmekọrịta e-commerce na-elekọta mmadụ, enwere ohere dị ukwuu maka ndị nwe azụmaahịa, naanị ma ọ bụrụ na atụmatụ a edobere nke ọma. Mgbasa mgbasa ozi ọha egwu egwu ma rụọ ọrụ dị oke mkpa na nzụlite nke ịzụ ahịa n'ịntanetị. Iji arụmọrụ nke mgbasa ozi mmekọrịta na e-commerce
Kwusaanụ na nchekwa data kwa ụbọchị
Iji bido ma bulie obodo gị, ịkwesịrị ịdebanye oge na-atọ ụtọ ma na-atọ ụtọ. Mụọ ihe kachasị mma mgbasa ozi, otu ndị na-ege gị ntị si emeghachi omume na ụdị dị iche iche, kedu oge kachasị mma iji biputere, wdg.
Dị nkenke ma dị nkenke
Ndị mmadụ nwere obere oge, yabụ, iwefe ozi abụghị ụzọ kachasị mma iji dọta ndị ahịa. Nye ha ozi dị nkenke ma dịrị naanị maka ngwaahịa nwere ike ịmasị ha. Nri ngwa ngwa ma dị mfe bụ mmeri mmeri. Ọzọkwa, tinye ụfọdụ ezigbo ihe ngosi anya. A post na-agụnye ihe oyiyi ma ọ bụ vidiyo ga-n'ịwa 50% ọzọ mmasị karịa otu na-enweghị ya.
Setịpụ ihe mgbaru ọsọ gị
Chee echiche ihe ị na-eme atụmatụ iru site na iji soshal midia. Ude ahia? Stkwado weebụsaịtị gị? Dịkwuo ahịa? Ihe a niile? Mee ka ebum n’uche gị nwee ike ịgbakọ, ka ị nwee ike soro usoro agam n’ihu ma tụọ arụmọrụ nke soshal midia maka azụmahịa gị. Sochie ọnụ ọgụgụ nke mgbasa ozi mgbasa ozi na ebe nrụọrụ weebụ gị, ọnụọgụ mmasị, mbak, nkọwa, wdg.
Jiri uru nke netwọkụ mmekọrịta dị iche iche
Are nọ na netwọkụ mmekọrịta, mana enweghị mmetụta ... Gbalịa iji atụmatụ niile akọwapụtara nke netwọkụ mmekọrịta dị iche iche wetara. Jiri hashtags, jiri akara ntinye aka na Facebook, mee asọmpi na Facebook, tinye pinterest pipụ na ihe ndị yiri ya. E-commerce na-elekọta mmadụ pụtara na-agbaso usoro mgbe niile. Enwere ọtụtụ nkọwa nwere ike inyere gị aka mee ka azụmahịa gị pụta ìhè.
Ndị mmadụ nwere ike ịzụta ngwaahịa ma ọ bụrụ na onye ọ bụla tupu ha ejiri ya ma nyochaa ya. Gwa ndị ahịa ka ha hapụ echiche ha na ngwaahịa ma gosi ya na ibe Facebook gị, dịka ọmụmaatụ. Nyocha ndị a ga - eme ka mmekọrịta mmadụ na ibe gị nwee ike mepụta ahịa gị.
Ihe mebere onye ọrụ
Ihe ndị mepụtara site na onye ọrụ na-akpali akpali n'ihi na ọ na-enye ndị ahịa nwere ike akaebe mmekọrịta ha na-achọ. Maka e-commerce na-elekọta mmadụ, ọdịnaya ndị ọrụ na-emepụta bụ ọla edo. Ndị mmadụ hụrụ n'anya ịhụ ọdịnaya nke ndị ọzọ kere, ha na-amata onwe ha na ya. Jụọ ndị ahịa gị ihe ha kwuru, foto, vidiyo ma biputere ha iji malite mkparịta ụka ahụ.
Mara ndị ahịa gị
Ọ bụrụ n’ị maghị ndị ahịa gị, ị nweghị ike bipụta ọdịnaya nwere mmasị ma na-adọta ha. Mara ha site n’ajụjụ ụfọdụ, nyocha ma ọ bụ mgbasa ozi mmekọrịta ka ị nwee ike itinye usoro dị mma nke ọma. Ozi gị kwesịrị ilebara mkpa gị anya - chọpụta ihe ha bụ.
Adịla naanị ire
N'agbanyeghị nke ahụ, isi ebumnuche nke iji usoro mgbasa ozi eme ihe abụghị ịzụrụ ihe. Ndị mmadụ na-eji mgbasa ozi ọha na eze n'ihi ọchịchọ ịmata ihe na maka mmekọrịta mmadụ na ibe ya. N’ihi ya, kwanyere ya ùgwù. Adịla arụ ọrụ naanị mgbe ị na-achọ ire ihe. Ndị mmadụ ga-akwụsị ma ghara ịga n'ihu ma ị mee nke ahụ.
Ọ bụ ezie na netwọkụ mmekọrịta bụ ebe iji kesaa ihe n'ihu ọha, ha na-abụwanye nzuzo. Ọtụtụ ndị ọrụ na-ahọrọ ozi nzuzo ma ọ bụ nkwukọrịta otu mechiri mgbasa ozi ọha na eze. Ndị na-ere ahịa ahịa kwesịrị ịgba mbọ hụ na nkwukọrịta na ndị ahịa nwere obi ụtọ ma na-atọ ụtọ. Ijikọ ezigbo oge na ndị na-ege ntị bụ isi omume n'ihi na ndị mmadụ kpọrọ asị ụbọchị echere maka nzaghachi email. Ma ị nwere ndị ọrụ dị na nkata ma ọ bụ jiri bot bot na-akparịta ụka, nsonaazụ ga-abụ onye ahịa afọ ojuju na ohere ntụgharị. Na e-commerce na-elekọta mmadụ, nkwukọrịta okwu dị ezigbo mkpa.
Taa, e-commerce na-agbasawanye na mgbasa ozi mgbasa ozi, naanị n'ihi na ọnụ ọgụgụ dị elu nke ndị mmadụ na-etinye oge n'ebe ahụ. Zụta site na ngwa mkpanaka bụ ihe a na-ahụkarị, na omume a ga-aga n'ihu na-eto na 2017. networksfọdụ netwọkụ mmekọrịta (Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter) mejuputara nhọrọ ịzụta ngwaahịa ozugbo site na ngwa mkpanaka ha. Ndị mmadụ na-ejikwa ohere ahụ eme ihe n'ihi na ha tụkwasịrị obi na netwọkụ mmekọrịta ahụ, na-alaghachikwuru ha mgbe niile na-enwe olileanya ịchọta ịzụta ihe ga-ekwe omume.
Advertisinggwọ mgbasa ozi
Ọtụtụ ndị na-ere ahịa na-amata uru na mkpa ọ dị iji mgbasa ozi mmekọrịta na e-commerce, nke mere ahịa ji aghọ nnukwu asọmpi. Inweta nsonaazụ dị ọcha na-esiri ike n'ihi na ndị mmadụ ga-ebu ụzọ hụ ozi sitere n'aka ndị enyi ha, ọ bụghị site na azụmaahịa na ụdị. Mgbe obere oge gachara, ị mụtara na ị ga-etinye ego na mgbasa ozi, ma kwụọ ụgwọ iji gosipụta azụmaahịa ahụ. Ebe ọ bụ na ọtụtụ ụlọ ọrụ malitere iji mgbasa ozi akwụ ụgwọ, ọnụahịa mgbasa ozi bidoro jiri nwayọ nwayọ, kwa.
Vidiyo dị ndụ
Anyị atụleworị uru nke vidiyo vidiyo na e-azụmahịa. Na mmekọrịta e-commerce, ọ bụ ụzọ kachasị mma iji pụta, n'ezie. Vidio ahụ na-adọta mmasị gị mgbe ị na-agagharị, ọdịnaya ya na-adọta gị. Mana, kemgbe afọ gara aga, ụfọdụ ntanetị mmekọrịta butere nhọrọ vidiyo dị ndụ. Na atụmatụ a, ị nwere ike ịgbasa ozi maka awa 4. Njirimara a nwere ike iwulite ihe omuma ma wulite obodo ngwa ngwa na nke oma. Enwere ike iji ya n'ọtụtụ ụzọ na-atọ ụtọ ma kee ihe - na Q&A dị ndụ, ngosipụta ngwaahịa, ma ọ bụ nyocha azụ na-Mpaghara. N'ihi uru ndị a, ọtụtụ ndị na-ere ahịa na-eji ya ma ọ bụ na-eme atụmatụ iji ya n'afọ a.
Ọrụ nke mebere ma gbasaa eziokwu ga-arụ na azụmahịa e-commerce buru ibu. Ezigbo ihe eji eme ihe na-enye ahụmịhe ahịa echefu echefu, ọ bụ ya mere ọ ji nweta ahịa dị ukwuu. Dị dị ọsọ ọsọ na-achọpụta omume a.
Mgbasa mgbasa ozi nwere ike ịbụ isi onye na-agbanwe egwuregwu na azụmahịa. Iji jiri elele niile nke mgbasa ozi na-ewetara gị, buru ụzọ mee nyocha gị ma mepụta usoro mgbasa ozi mmekọrịta dị mma. Na n'ezie, itinye ndị ahịa na etiti ya. Mepụta mmekọrịta, wulite ntụkwasị obi na mmekọrịta na-adịgide adịgide. Nke mbu, tinye ego na agbụ, gbalịa ree ihe. Soro usoro, mụọ netwọkụ mmekọrịta na akụkọ ha na-enye. Nkọwa ọ bụla nwere ike ịbụ nnukwu mmụba maka azụmaahịa gị, yabụ gbalịa ka ị ghara ịhapụ ihe ọ bụla. Ecommerce na-elekọta mmadụ na-ewe ọtụtụ ọrụ siri ike, buru nke ahụ n'uche.
Ọ ga-abụrịrị ihe na-atọ ụtọ ịlele etu usoro ndị a niile a kpọtụrụ aha ga-esi pụta n'ọdịnihu nke mgbasa ozi mmekọrịta na e-azụmahịa.
Kedu otu esi eji usoro mgbasa ozi iji kpuchie ndị na-ege ntị ọhụrụ na nke ugbu a maka azụmaahịa ecommerce gị? You na-eme atụmatụ ịgbaso usoro ndị a? Enwere ike ịkekọrịta ahụmịhe gị, echiche, na ajụjụ.
Biputere Kwa -bọchị- Maka ntọala na uto nke obodo gị, ịkwesịrị biputere ọdịnaya oge niile iji dọta ndị ahịa gị. Nye ozi dị mkpirikpi, nke ziri ezi na nke bara uru gbasara ngwaahịa ahụ ka ha wee nwee mmasị na ha. Nnyocha na ọnọdụ, mmeghachi omume nke ndị na-ege ntị na ụdị dị iche iche, oge oge ọ kacha mma biputere, wdg. dị mkpa. Ihe edere ya na onyonyo ma obu vidiyo na eme 50% karia ndi ozo n’enyeghi ya.
Setịpụ ebumnuche gị - Kọọ nkenke na ịhazi ihe ịchọrọ ịme (ọ bụrụ na ọ na-abawanye na ahịa, akara akara, mmụba nke okporo ụzọ na weebụsaịtị gị, ma ọ bụ na ihe abụọ) site na iji usoro mgbasa ozi. Mee ka ebum n’uche gị bụrụ nke a pụrụ ịtụ n’ihe atụ, ka ị wee nwee ike ịmata ọganihu nke arụmọrụ nke mgbasa ozi mmekọrịta mmadụ na ibe maka azụmahịa e-commerce gị.
Njikọ Ndị Ahịa - Mara ndị ahịa gị site na nyocha, mgbasa ozi mmekọrịta, ma ọ bụ ajụjụ ọnụ ka ị nwee ike itinye usoro gị n'ọrụ n'ụzọ dị mkpa.
Social Media na SEO- Social media na SEO na-aga aka. Inwe mgbasa ozi mgbasa ozi na-arụsi ọrụ ike na-abawanye ọnụego SEO nke weebụsaịtị gị.
Nkatọ dị mkpa: ndị ọbịa na-adọrọ mmasị karị ma yikarịrị ka ha ga-atụkwasị obi na ngwaahịa ma ọ bụrụ na onye ọ bụla tupu ha ejiri ya ma nyochaa ya. Gwa ndị ahịa ka ha hapụ echiche ha banyere ngwaahịa na ọrụ ma gosipụta ya na weebụsaịtị gị. Nyocha ndị a ga-eme ka mmekọrịta mmadụ na ibe gị banye na peeji gị ma bulie ahịa.
E-commerce na mgbasa ozi mmekọrịta zuru oke. O doro anya na ọ bụ onye na-agbanwe egwuregwu na azụmahịa niile. Site n'ime ka ọwa mgbasa ozi mmekọrịta bụrụ isi ebumnuche nke nkwukọrịta, ụlọ ọrụ nwere ike ịdabere na ndị na-ege ntị, wee si otú a mee ka ha bụrụ ndị ahịa.
Ka o siri sie ike ịzụta ma ọ bụ nweta ihe, o yikarịrị ka anyị ga-agafe. Nke a na-akọwa ihe kpatara saịtị ecommerce na-eji ogologo oge iji buru ibu nwere ọnụego bounce dị elu, yana ụlọ ahịa dị n'ịntanetị nwere ihu na ihu na-ere obere. Otu nwere ike ịzụta ngwaahịa site na Instagram, Pinterest na Twitter. Ozugbo Apple Pay na-enweta ahụmịhe zuru ebe nile, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe na-atụ ụjọ iche echiche nfe ịzụ ahịa ga-adị mfe. Mana na afọ dijitalụ, aha azụmahịa na-adị ndụ ma nwụọ maka ọnọdụ ha na mgbasa ozi mmekọrịta. Mee ka ebum n’uche gị bụrụ nke a pụrụ ịtụ n’ihe atụ, ka ị wee nwee ike ịmata ọganihu nke arụmọrụ nke mgbasa ozi mmekọrịta mmadụ na ibe maka azụmahịa e-commerce gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » Marketing » Mgbanwe nke ọrụ nke netwọkụ mmekọrịta na ecommerce